Tantaranà Ray Amandreny Anankiroa: Zeorziana iray mpanankanto manohitra ny fankahalàna, ny fanekena sy fianarana mitia fiainana · Global Voices teny Malagasy
Tantaranà Ray Amandreny Anankiroa: Zeorziana iray mpanankanto manohitra ny fankahalàna, ny fanekena sy fianarana mitia fiainana
Mandrisika ny fankahalàna LGBTQ+ ilay "Andron'ny Fahadiovan'ny Ankohonana" an'ny fiangonana
Voadika ny 30 Jolay 2019 11:57 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Français, Español, Italiano, Ελληνικά, 日本語, русский, English
“Ireharehàko ny fahatratrarako ny maha izaho ahy sy ny tsy nileferako”, hoy Drago. (Tamuna Chkareuli / OC Media)
Dika iray avy amin'ny lahatsoratra iray fiarahamiasa natolotr'i Tamuna Chkareuli ity manaraka ity izay nivoaka voalohany teo amin'ny vohikala OC Media.
I Drago – anaram-bositra an-tsehatra – dia tovolahy iray 17 taona avy ao Rustavi, Zeorzia. Mpanamboatra ny endrik'ireo mpanakanto, mpilatro sady sarimbavy mpandikateny izy. Eny amin'izay alehany rehetra eny, mahazo fijery tsy misy tahotra izy – mitafy ampahibemaso akanjom-behivavy, volo nolokoina sy ny ankosotra, tsy misy zavatra hafa andrasany. Ny fahasahiana hijoro amin'ny maha izy azy, hoy izy, dia avy amin-dreniny, izay miahy azy hatrany eny amin'ny làlana ombàny.
“Hatramin'ny naha-zazalahikely ahy dia nanana tombony maro samihafa aho. Lava foana ny voloko, ankizivavy foana no namako ary tsy tiako mihitsy ny nandray anjara tamin'ireo lalao maneho ny maha-zazalahikely. Nisy ireo fikasàna hanovàna ahy, avy amin'ny raiko ny ankamaroany, saingy nijoro hatrany aho.”
“Nitombo niaraka tamin'io fijoroana io aho. Tadidiko fa indray andro dia nanandrana ny hanapaka ny voloko izy raha mbola tao anatin'ny torimasoko aho, saingy taitra aho ary tsy nisy azony natao. Nentiny tany amin'ny fianarana manao ady totohondry aho ary nividianany fonon-tanana fitondra manao ady totohondry’, saingy tsy nisy vokany ihany koa izany.”
“Matetika ny raiko no mamelatra velam-pandrika amiko eny andalana, mangataka ahy fara-faharatsiny ny mba hiankanjo “araka ny tokony ho izy”. Saingy tsy tiako nafenina ny maha izaho ahy. Ary tsy hoe izy irery fotsiny ihany fa ireo lehilahy hafa tao anatin'ny lafin-kavana ihany koa. Mba ho fiarovana manokana ho ahy, natsahatro avokoa ireo fifandraisana rehetra tamin'ny dadatoako sy ny raibeko.”
Matetika mampiasa ny fiara fitaterana madinika i Drago mba hivezivezena any Rustavi. Tapa-bolana lasa izay, nisy lehilahy iray nikapoka an'i Drago avy ao ivelan'ny fiara ary niezaka nandositra. (Tamuna Chkareuli/ OC Media)
“Ny reniko irery no hany tokana fahazavan'ny fiainako. Eo anilako lalandava izy ary hatramin'izao, na inona na inona mitranga. Foy fahazazàko, nanohitra hatrany ny raiko izy ary niaro ahy, ary ankehitriny, taorian'ireo taona maro, miaro an-dreniko foana aho raha vao misy olona milaza zavatra manafintohina azy — mateti-pitranga io. Ny ankamaroany dia avy amin-draiko avokoa, saingy tato anatin'ny efatra taona farany, soa ihany, tsy niara-nonina intsony izahay ka nahatsiaro ho afaka aho.”
“Naniry ny raiko, noho ny maha-izaho ahy, ny hanàla aminay ny trano tao Rustavi ka hanary anay sy ny reniko, saingy noho ny fanohanan'ny Hetsika Miaro ny Fitoviana Lenta [vondrona pelaka iray], nandresy teny amin'ny tribonaly izahay.”
“Tena mahatsiaro sambatra be izahay amin'izao fotoana izao. Olona sambatra aho ary azoko avokoa izay angatahiko rehetra noho ny reniko. Maniry ny handeha any ivelany sy ho lasa matihanina amin'ny fikarakarana endrika aho, ary tohanany io hevitra io. Ekena, teny ampiandohana, tsy tiany izay nataoko. Saingy mandray karama somary mendrika aho avy amin'ny asako aho, ary tiany ilay hoe izaho mahaleo tena.”
‘Vao 13 taona monja aho raha niantso polisy voalohany’
‘Tao an-tsekoly, nahatalanjona fa nanaiky ahy tsara daholo ny rehetra fotoana fohy taty aoriana. Fantatr'izy ireo tsara aho ary tsy nisy nasiaka tamiko. Izaho no voalohany nitafy hafa indrindra tao an-tsekoly ary niharan'ny fanapempoana noho io antony io, saingy tsy nisy mihitsy ny herisetra ara-batana. Noheveriko fa fantatr'izy ireo ihany koa hoe haiko tsara ny zoko ary arovako hatrany izany.’
“Vao 13 taona monja aho raha niantso polisy voalohany. — Nandraman'izy ireo [ireo mpanafika] nosintonina ny sasantsasany tamin'ireo fitaovako manokana izay somary niavaka kokoa. Hatramin'izay, tsy maintsy niantso polisy foana aho saika ho isantaona.”
“Ny reniko no olona nampianatra ahy ny zavatra manan-danja indrindra — tokony ho afaka mamelon-tena irery aho. Misy ireo trangan-javatra izay tsy ahafahan'ny olona manampy ahy, afa-tsy ny tenako irery ihany.”
“Tapa-bolana teo ho eo, nitranga ny fanafihana farany, raha iny izaho nipetraka tao anaty fiara fitaterana iny dia nisy lehilahy iray avy any ivelany nikapoka ahy ka nikasa ny handositra ahy. Notànako an-tsoratra izay voalazan'ireo vavolombelona, nivoaka ny fiara aho ary nalaiko sary avy tany ivelany ny takelaka famantarana ny fiara , dia notadidiako ny endrik'ilay mpanafika. Afaka namantatra azy aho taty aoriana kely, ary ankehitriny efa andalam-piatrehana fitsaràna izy.”
Ny tena ray amandreny dia tia ireo zanany na toa inona na toa inona izy ireo’
“Maniry ny hanana ankohonana aho amin'ny hoavy ary hanabe ny zanako miaraka amin'ny fankatoavana, na toa inona izy na toa inona. Ny tena ray amandreny dia tia ireo zanany, na toa inona na toa inona izy ireo. Tsy tena ray amandreny ny raiko amiko, ary tsy menatra aho ny milaza izany.”
“Ireo namako ao am-pianarana, ireo sakaizako sy ireo mpiara-belona amin'ny faritra misy ahy ao Rustavi dia manaiky ahy avokoa ary manampy ahy koa. Mahahalala ahy betsaka lavitra izy ireo raha miohatra amin'ny raiko. Ireharehàko ny fahatratrarako ny maha izaho ahy sy ny tsy nileferako. Marobe ireo tao anatin'ny fianakaviako no nitovy hevitra tamin'izany, anisan'ireo ny vadin'ny iray tamin'ny fianakavian-dreniko izay miasa saina fatratra mikasika ny fiarovako tena.”
“Ho an'ny 17 May [Andro Iraisam-pirenena anoherana ny fankahalàna ny mitovy fananahana, ny nanova fananahana ary ireo manana taovam-pananahana roa], nangataka ahy izy ny hanao fitsangatsanganana miaraka amin'izy ireo mba ho voaaro. Tsy matahotra momba izany ny reniko, raha ny marina, marobe ny zavatra niova ho amin'ny tsara kokoa tao anatin'ny fiarahamonina, ka feno fanantenana izahay.”
Teny an-dalana hamonjy fivoriana miaraka amin'ireo mpisolovava azy, natoky tena i Drago fa ho eo anilany ny lalàna. (Tamuna Chkareuli / OC Media)
‘Ny andro manan-danja indrindra ho an'ny olona pelaka’
“Ho ahy, ny 17 May no andron'ny ady anoherana ny fankahalàna. Andron'ny fijoroana miaraka io ary tsapako fa io no andro manan-danja indrindra ho an'ireo olona pelaka. Indrisy anefa, nangalarin'ny [Fiangonana Ortodoksa Zeoriziana] io andro tsara io ka nanjary lasa andro ho an'ny Fahadiovan'ny Ankohonana. Eny, te-hilaza amin'izy ireo aho hoe mba madio ihany koa anie ireo fianakavianay ireo, ary afaka hiaraka amin'izy ireo izahay amin'ny fankalazana izay ataony.”
“Tiako ny hilaza amin'ireo izay maniry ny hiresaka amin'ny fianakaviany saingy matahotra ny hanao izany – anano ny faharisihana hanao dingana voalohany. Raha ataonareo amim-pahamalinana izy io, manana tombony tsara ianareo ny ho ekena. Saingy miankina ihany koa amin'ny ray amandreny izany. Ary tsy heveriko ho tsy maintsy manana “fomba fisainana maoderina” ny ray amandreny”. Tsy misy maha-maoderina ny momba izay hevitra tokony hitiavanareo ny zanakareo.”